Ngokuthuthuka okusheshayo kwemboni yesimanje nokuthuthuka okuqhubekayo kwezinga lokuphila labantu, ukufunwa kwabantu emabhokisini okupakisha kuzoqhubeka nokwanda. Ngakho-ke, abathengi manje bahambisa phambili izidingo eziphakeme kwikhwalithi yamabhokisi okupakisha. Ngakho-ke kudinga ukusebenzisa i-technolo entsha ...
Yimiphi imisebenzi yamabhokisi okupakisha?
Isibhakela sesiphenduke ithuluzi elinamandla lokumaketha. Amabhokisi wokupakisha aklanywe kahle angakha inani elilula labathengi nenani lokuphromotha labakhiqizi. Izici ezahlukahlukene zizokhuthaza ukuthuthuka okuqhubekayo kokupakisha njengethuluzi lokumaketha ekusetshenzisweni. Njengoba imikhiqizo eminingi iyathengiswa ...
Zingaki izinqubo ezikhona zokwenza ibhokisi lesipho?
Njengoba amabhokisi ezipho ethandwa kakhulu eminyakeni yamuva, abantu abaningi ngokwengeziwe sebenentshisekelo yokuzenzela awabo amabhokisi ezipho. Iningi lamabhokisi ezipho ezisezingeni eliphakeme empilweni yansuku zonke enziwe ngephepha, futhi ingaphezulu lephepha lilungele ukucutshungulwa okwengeziwe. Yize amabhokisi ezipho ebukeka elula, ...